खाना पकाउने ग्याँस किन तरल हुन्छ र गनाउँछ ? जानी राखौँ — OnlineDabali
खाना पकाउने ग्याँस किन तरल हुन्छ र गनाउँछ ? जानी राखौँ
Posted on October 4, 2016 by अनलाइन डबली
तपाईँ हाम्रो भान्सा कोठामा पाइने ग्याँसलाई एलपी ग्याँसले इन्धनका आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएको कुरा त थाहा नै छ । तर यो किन तरल हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी नहुन सक्छ । यसबारे हाम्रो पाठकलाई केही जानकारीको लागि यो सामाग्री पस्केका छौँ ।
एलपी ग्याँसको पूरा नाम हो ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम ग्यास’हो । यसको अविस्कार वा प्रयोग सन् १९०० को शुरुवातमा भएको हो । यो शब्द तरल ग्याँसको रुपमा रहने हाइड्रोकार्बनलाई जनाउन प्रयोग हुने गर्छ । यसमा प्रोपान र बुटान ग्याँस पर्दछन् ।
यसबाहेक अरु इथेन, पेन्टानजस्ता ग्याँसहरु पनि यही समूहको ग्याँसभित्र पर्दछन् । एलपी ग्याँसमा ग्याँस र तरल एकैचोटी मिसाइएको हुन्छ । वास्तवमा यही विशेषता अर्थात् ग्याँसलाई तरल रुपमा बनाईएका कारण नै एलपी ग्याँसले विश्वब्यापी रुपमा ब्यापक उपभोग हुन थालेको हो ।
सामान्य तापक्रम र चापमा एलपी ग्याँसको रुपमा पनि ग्याँस नै हुन्छ । तर यसलाई अति तीव्र चाप र चिसोपनाको मद्दतले तरल बनाईएको हुन्छ । यो तरल अवस्थामा रहँदा त्यो राखिएको भाँडोको चाप एउटा ट्रकको हावा भरिएको टायरको चापभन्दा दोब्बर हुने गर्छ । यसरी एलपी ग्याँसलाई तरल बनाउनुको एउटै कारण चाहिँ यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्न सजिलो होस वा थोरै ठाउँमा पनि धेरै ग्याँस अटाउन सकोस् भन्नु नै हो ।
एक युनिट एलपी ग्याँसले ग्याँस अवस्थामा रहेको एलपी ग्याँसको २ सय ७० युनिटले दिने बराबरको शक्ति दिन्छ । यसको अर्थ के हो भने ग्याँस अवस्थामा नै एलपी ग्याँसलाई राख्ने हो भने त्यसलाई राख्नको लागि २ सय ७० गुना बढी ठूलो भाँडो चाहिन्छ । हामीले खाना पकाउन तथा गाडीहरु चलाउन लगायत अन्य दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने एलपी ग्याँसमा प्रोपान र बुटानको मिश्रण गराइएको हुन्छ ।
यो ग्याँस किन गन्हाउछ ?
वास्तवमा हामीले खाना पकाउनको लागि प्रयोग गर्ने एलपी ग्याँस प्राकृतिक अवस्थामा रहँदा गन्हाउँदैन किनकी यो गन्धरहित हुन्छ । तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले घरायसी वा ब्यवसायिक प्रयोगमा ल्याउनका लागि त्यसमा हाइड्रोजन सल्फाइड वा मर्काप्टान नामक रसायन हालिएपछि गन्धहीन ग्याँस गन्हाउन थाल्छ । यो ग्याँस अत्यन्तै ज्वलनशील हुन्छ । अर्थात् आगोको सानो झिल्कामात्रै पनि यो बल्नका लागि पर्याप्त हुन्छ । –एजेन्सीहरुको सहयोगमा
बार्सिलोनाले होरेपछि घाइते मेसी फर्किए
आइएसका प्रमुखको खानामा कसले हाल्याे विष ? बग्दादीको अवस्था चिन्ताजनक !
Posted in रोचक बिचित्र, समाचार | Leaveareply
अभिनयसँगै गायनमा पनि रुचि राख्ने आलिया अब गायकी जीवनमै प्रस्तुत
विश्वकपमा कसरी सहभागी हुने रोचक सुझाव
‘क्वान्टिको ३’ को अन्तिम भागमा पुग्दा प्रियंकाविरुद्ध आक्रोश
गोरेको ३७ पानाको बयान सकियो, साढे २ बजेदेखि सो मुद्दामा पुनः बहस सुरु
गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ढुंगेललाई आममाफी, सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ
गुराँसको राजधानी तीनजुरेमा रहेको गुफापोखरीमा पानीको सतह घट्दै
कतिपयको मन पिरोल्ने, विलासी जिवनको अरबपति कुकुर
नेपाल एयलायन्सका २ जना कर्मचारी साढे ३३ किलो सुन काण्डमा पक्राउ